အလုပ်အကိုင်သတင်းအချက်အလက် | Shii-Farm
ပေးအပ်မည့်တာဝန်မှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှ သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းအထိ။ အတိအကျဆိုသော် လယ်ထွန်စက်မောင်းနှင်ခြင်းစသည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းအားလုံး၊ လယ်ယာတွင်း၌ပေါင်းသင်ခြင်းစသည့်လွယ်ကူသည့်အလုပ်များကိုလည်းတာဝန်ယူရပါမည်။
လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းသည် အများအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရှား၍ လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် လယ်ယာလုပ်ကိုင်မှသာရရှိနိုင်သည့် စိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ရကျိုးနပ်သည့်ခံစားချက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်တင်ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် တွဲကားယာဥ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူများကိုဦးစားပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်။
ပေးအပ်မည့်တာဝန်မှာ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွင် Microbiological Survey နှင့် Process Control ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းအရထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ ဇီဝဗေဒအရပျက်စီးခြင်းကိုအစပြု၍ ဖော်ပြချက်မှားယွင်းခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်မှုဖော်ပြချက်မှားယွင်းခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဥ်ပုံစံကိုစဥ်းစားတီထွင်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတာဝန်ကိုပေးပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသိရှိနားလည်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ အလုပ်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း အတွေ့အကြုံမှတဆင့် လေ့လာသင်ယူရပါမည်။
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအလုပ်သည် ကုမ္ပဏီတွင်း၌ စိုက်ပျိုး၊ ရိတ်သိမ်းထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကိုရွေးခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အလေးချိန်ခြင်း၊ အိတ်ဖြင့်ထုတ်ပိုးခြင်းစသည့် ထုတ်လုပ်သည့်အလုပ်များဖြစ်သည်။ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွင် အလုပ်အတွေ့အကြုံရချင်သူများ Forklift ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူကိုဦးစားပေးပါမည်။
အထက်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးထားပါက အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပေ။ ထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းကိုအခြေခံမှ သေချာစွာသင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း စိတ်ချလက်ချလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအထွေထွေအလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရပါမည်။ ဧည့်ခံခြင်း၊ လက်ဖက်ရည်ချခြင်း၊ ငွေတောင်းခံခြင်းနှင့် ဒေတာစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ တက်ရောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းစသဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်အရေးကြီးသောအလုပ်တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။
SHII-FARM တွင်စိုက်ပျိုးထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို အအေးခံဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အခြောက်ခံဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ လက်ဖက်ခြောက်စသည်တို့အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရောင်းချလျက်ရှိသည်။ ရောင်းအား၊ ပစ္စည်းဖြည့်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းစသည့်တို့ကို ဝယ်ယူသူနှင့်ဆက်ဆံရသည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။
SHII-FARM ၏အားသာချက်မှာ ကျူးရှူးပြည်နယ်မှတန်ဖိုးရှိသောသဘာဝကိုအသုံးပြုပြီး၊
SHII-FARM တွင် ယောင်္ကျား၊ မိန်းမ၊ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲ၊
လူမျိုးပေါင်းစုံ အလုပ်ကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ၊ အချင်းချင်း ကောင်းမွန်စွာယှဥ်ပြိုင်ရင်း၊
ကုမ္ပဏီတွင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ 10 နှစ်ရှိပါပြီ။ စက်ပစ္စည်းများစွာဖြင့် အမျိုးမျိုးသောအလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းဟာ အဖိုးတန်သည့်အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်။ နောင်အနာဂတ်မှာ နည်းပညာတစ်ခုတည်းသာမက အသိပညာဗဟုသုတများလည်းတိုးပွားအောင် ကြိုးပမ်းချင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်ဝင်ပြီး 14 နှစ်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်ပြီး၊ နေ့စဥ်ကောင်းမွန်စွာယှဥ်ပြိုင်ရင်း အောင်မြင်လာသော လုပ်ရကျိုးနပ်သည့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတူတကွကြိုးစားကြရအောင်။
ဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်တာ2နှစ်ရှိပါပြီ။ ကြီးမားသောစက်ပစ္စည်းတို့ကိုကိုင်တွယ်ရခြင်းဟာခက်ခဲသော်လည်း ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ မနှစ်ကနွေရာသီမှာ Miyazaki မှာရှိတဲ့ Aoshima ပင်လယ်ကမ်းခြေသို့သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။3နှစ်ပြည့်လျှင်လည်း SHII-FARM တွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ချင်ပါသေးတယ်။
ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ3နှစ်မြောက်ရှိပါပြီ။ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးကဏ္ဍမှ ဝယ်ယူသူများထံ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရသော စားသောက်ကုန်တို့ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် နေ့စဥ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ ခက်ခဲသည့်အရာများရှိသော်လည်း သဘောကောင်းသောစီနီယာက အမြဲတစေ နောက်ကလိုက်၍ကြည့်ရှုပေးပါတယ်။
စီနီယာများကသဘောကောင်းပြီး သေချာသင်ပြပေးတဲ့အတွက် စိတ်ချစွာ လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နိုင်လာပါတယ်။
ဂျပန်အစားအစာထဲတွင် ဆူရှီကိုကြိုက်ပါတယ်။ အားလပ်သည့်တစ်နေ့မှာ Disney Land သို့သွားဖူးချင်ပါတယ်။
ဝယ်ယူသူတို့နှင့်စကားပြောဆိုခြင်းမှတဆင့် သင်ခန်းစာအများအပြားသင်ယူနိုင်ပြီး၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရကျိုးနပ်ကြောင်းခံစားရပါတယ်။ SHII-FARM မှ အလွန်အရသာရှိသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို လူတိုင်းသိရှိလာအောင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။
ခူးပြီးခါစ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို အဆင့်မြင့် စီမံခန့်ခွဲစနစ်ကိုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွင် လတ်ဆတ်မှုကိုပျောက်ဆုံးမသွားအောင်ပြုလုပ်ပြီး အအေးခံကာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရသာရှိမှုကို ထိုအတိုင်းထမင်းစားပွဲပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
စိုက်ပျိုးကာလ：ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ / နိုဝင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ
Kirishima တောင်တန်းမှလာသောဆောင်းရာသီလေပြေ၊ Kirishima တွင် သိုလှောင်ထားသောအာဟာရဓာတ်များပါဝင်ပြီး ချိုမြိန်၊ စိမ်းလန်းစိုပြည်သော ဟင်းနုနယ်ရွက်။ ညှပ်ထားသောကြောင့် ထိုအတိုင်း ထောပတ်ဆော့စ်ဖြင့်စားသုံးနိုင်ပါသည်။
လှီးထားသော Komatsuna အရွက်
စိုက်ပျိုးကာလ：ဧပြီလမှ ဇွန်လအထိ၊ အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ
အသားထူပြီး ကျွတ်ဆတ်သောအရသာရှိသည့် Komatsuna အရွက်။ အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝမှုရှိပြီး ပြုတ်စားပါကအရသာကို အလွန်စွဲလန်းသွားစေနိုင်သည်။
စိုက်ပျိုးကာလ：ဇွန်လမှဇူလိုင်လအထိ၊ စက်တင်ဘာလမှ အောက်တိုဘာလအထိ
ပြည့်ဝသောလက်ဖက်အရသာရှိသည့် ရွှေပဲသီး။ ခူးယူပြီးချက်ချင်း အအေးခံခြင်းဖြင့် လတ်ဆတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထိုအတိုင်းကို အရက်သောက်သည့်အချိန်၌ အမြည်းစားခြင်း၊ သရေစာအဖြစ်စားသုံးနိုင်ပါသည်။
မြေသြဇာကောင်းမွန်သည့်မြေပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးထားသည့်အရသာရှိသော ဂေါ်ဘိုး။ အခွံခွာ၍ ဖြတ်တောက်ထားပြီး၊ အစီးများဖယ်ရှားပြီးဖြစ်သည်။ အမျှင်ဓာတ်များစွာပါဝင်သော ဂေါ်ဘိုးအသုပ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလန်းဆန်းစေပါသည်။
စိုက်ပျိုးကာလ：ဧပြီလမှ မေလအထိ၊ နိုဝင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ
လတ်ဆတ်သည့်အချိန်အတွင်းမှာအအေးခံထားသည့် ကျွတ်ရွသော ဘရော်ကိုလီ။ စားသုံးရလွယ်ကူအောင်ဖြတ်တောက်ထားပါသည်။ ကျွတ်ရွသောအရသာကိုရရှိရန် ဘရော်ကိုလီ ကိုသုပ်၍စားသုံးနိုင်ပါသည်။
နူးညံ့ပြီး စိုစွတ်သောအရသာရှိသည့်ပိန်းဥ။ အခွံခွာရန်မလိုဘဲ လွယ်ကူစွာစားသုံးနိုင်သည့် အရွယ်ပမာဏဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ လွယ်ကူစွာအရသာရှိသော ပိန်းဥပြုတ်ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးကာလ：ဧပြီလမှဇွန်လအထိ၊ အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ
စွဲလန်းစေပြီး ထူးခြားသည့်အရသာရှိသော မုန့်ညင်းစိမ်းသည် အိုကီနာဝါဒေသတွင်အဓိကစားသုံးသောဟင်းရွက်ဖြစ်ပါသည်။ မည့်သည့်အချိန်မဆို ရိုးရှင်းစွာကြော်စားခြင်းဖြင့် အရသာရှိစွာ စားသုံးနိုင်ပါသည်။
မြင့်မားသောအာဟာရများပါဝင်ကာ ချိုမြိန်ပြီး၊ ရိုးတံသွယ်၍စားရလွယ်ကူသော ကိုက်လန်ဖြစ်သည်။ အာဟာရဓာတ်မြင့်မားပြီး၊ ဆီဖြင့်ကြော်စာခြင်း၊ စမူသီဖျော်သောက်ခြင်း၊ အသားနှင့်ရော၍ကြော်စားနိုင်ပါသည်။
ွှေပဲသီးတောင့်မှခွာယူထားသည့် လတ်ဆတ်သော ရွှေပဲသီးဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှုပ်စရာမလိုဘဲ ဟင်းရည်အအေးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အကြော် (တန်ပူရာ)စသည့်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဟင်းထဲသို့ထည့်၍စားသုံးနိုင်သည်။
Bldg., 3028 Mikanoyama, Nojiri-cho, Kobayashi-shi, Miyazaki-ken, 886-0213, Japan.
4881-17 Miyazaki Freeway Industrial Park, Oaza Hirowara, Takaharu-cho, Nishimorokata-gun, Miyazaki-ken, 889-4411, Japan.
ဥက္ကဌ Hirofumi Shii
အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ Eisuke Shii
Q1. အတွေ့အကြုံမရှိသူ၊ အခြားလုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှလည်း အလုပ်လျှောက်နိုင်ပါသလား?
A. အတွေ့အကြုံမရှိသူ၊ အခြားလုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်မှလည်း အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Forklift ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် ကုန်တင်ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူများကိုဦးစားပေးမည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်း 35 ယောက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။
Q3. လယ်ယာနှင့် စက်ရုံကိုလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါသလား?
A. ကုမ္ပဏီလည်ပတ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံလေ့လာကြည့်ရှုခြင်းအား အချိန်မရွေးလာရောက်နိုင်ပါသည်။
မလာခင် အကြောင်းကြားကာ ရက်စွဲနှင့်အချိန်ညှိပြီးနောက် ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။
Q4. အလုပ်တာဝန်ကို မည်သို့ဆုံးဖြတ်၍ပေးအပ်သနည်း?
A. ကာယကံရှင်၏ဆန္ဒနှင့်သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိကိုကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။
ယခုအထိဖြတ်သန်းခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံ၊ အင်တာဗျူးမေးမြန်းခြင်းတို့မှတဆင့် ဝန်ထမ်း၏ဆန္ဒကိုထည့်သွင်းစဥ်းစားပြီး၊ စွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည့်ပုံစံဖြင့်သာ ဝန်ထမ်းတို့အားအလုပ်လုပ်ကိုင်လိုစေချင်ပါသည်။
Q5. အလုပ်လျှောက်သည့်အဆင့်မှခန့်အပ်သည့်အဆင့်အထိ လုပ်ငန်းစဥ်ကိုပြောပြပါ။
A. အဓိကအားဖြင့် ကုမ္ပဏီလည်ပတ်ခြင်း→အလုပ်လျှောက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြခြင်း→အင်တာဗျူးနှင့်စာမေးပွဲ→အလုပ်ခန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။